एम. डी. मोजिबुल्लाह , रौतहट , २०७७ पुस २८, मङ्गलबार,०८:४९:PM
तहरौट, २८ पुस । नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली एवं समाज सेवी महिला नेत्री श्रीमती अन्जु झाको कान्छो सुपुत्रको जन्म दिनको शुभ अवसरमा ईशनाथ नगरपालिका वासीलाई न्यानो राहत वितरण गरेकी छिन्।
ईशनाथ नगरपालिका वार्ड नं.९ डुमरिया र गौरमा कम्बल र डसना न्यानो राहत वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । गौरको ठुलो बजारको प्राथमिक विद्यालयमा आयोजित वितरण कार्यक्रममा ईशनाथ न.पा. कै ६५ जना गरिब र विपन्न परिवारलाई १ थान कम्बल र १ थान डसना वितरण गरिएको थियो । त्यसै गरी ईशनाथमा भएको कार्यक्रममा ४२ जना गरिब र विपन्न परिवारलाई न्यानो कम्बल र डसना वितरण गरिएको थियो ।
गौरको वितरण कार्यक्रम त्यसपछि आजै ईशनाथ नगरपालिका ९ डुमरियामा समेत वितरण कार्यक्रम आयोजित गरिएको थियो । श्रीमती अन्जु झा हरेक वर्ष आफ्नो छोराको जन्मदिनको अवसरमा विभिन्न समाजसेवी कार्यक्रम गर्दै आएका हुन् । "आफ्नो खुसी साट्ने र समाजका लागि एक छोटो प्रयास गरेछु र थप समाजसेवा गर्न मौका पाइयोस अन्जु झा भन्नु भो ।"